Khadiija Kensig : Khaashuqji isaga oo aan i macsalaameyn ayay iga dileen - BBC News Somali
''Tani waxay ahayd dhacdo la yaab leh, qof walbo oo ka dambeyay soona amray in la dilo Jamaal, kuwii falkan fuliyay, qof walbo oo ka dambeyay ama gacan ka geeystay dilkan waa in caaddaalad la marsiiyo'' ayey tiri Khadiija oo ah gabadhii u doonnaneyd Jamaal Khashoqji.
Caadil Al Jubeyr: Sucuudiga ayaa lagu maxkamadeynaya dadkii ka dambeeyay dilka Kaashogji
''ma anaan fileyn dhimashadiisa, Jamaal in uu dhintay umaanan maleyneynin, waxay ahayd dhacdo argagax leh, waxaan isku diyaarineynay inaan aroos galno goor dhow, kadibna waxaa dhacay waxaanan filaneynin, argagax ayey ahayd''.
''Wuxuu galay safaarada gudaheeda kama uusan soo laaban, xitaa ismaanan macsalaameynin, hadii qof u dhimanaayo, waa inaad ka aragtaa il geeriyeed, waxaas dhan ma aysan dhicin, ma naqaano waxa ku dhacay isaga, xita maanan arkin. Ilaa dhimashadiisa ay xaqiijiyeen Sacuudiga ma aaminin in uu dhintay, waxaan qabay rajo ah in uu noolyahay balse maalinki ay xaqiijiyeen dhimashadiisa waxay iila mid ahayd inay i dileen dhowr jeer'' ayey tiri Khadiija Kensig.
Mas'uuliyiinta Sucuudiga ayaa dilka Jamaal Khaashuqji ku sheegay "howlgal khaldamay", iyagoo bixiyay macluumaad horleh oo sii huriyay carada caalamka, balse ka duwan kuwii horey uga soo yeeray.
Wasiirka arrimaha dibadda Caadil Al-Jubeyr ayaa warbaahinta Fox News u sheegay in "dilka" uu ahaa "khalad aad u weyn" wuxuuna beeniyay in dhaxal sugaha boqortooyada ee awoodda badan uu amray dilkaas.
Dhageyso, Xaafadda Islii: Xarun ganacsi oo looga "kala cararay cabsi bam" darteed, Muddada 3,31
Dhageyso, Khilaafka Farmaajo iyo Rooble: Halkey marayaan wadahadallada u socdo labada masuul ee ugu sarreeya Soomaaliya?, Muddada 3,04
Dhageyso, Yusuf Xasan: Qarixii uu ku dhaawacmay xildhibaanka yaa ka dambeeyay?, Muddada 3,42
24 Agoosto 2021
Dhageyso, Gabdho Soomaali ah oo aaday Suuriya
Muuqaal, Telefishinka BBC Somali